Nandraiky narary ilay tovolahy. Rehefa fantatry ny rainy ny anton'aretina dia nantsoiny i Agnès, ka tamin'io no nanambaran'i Agnès fa kristianina izy ary efa nanoka-tena ho an'i Jesoa Kristy nanomboka teo amin'ny faha-10 taonany. Hoy izy hoe: "Efa ela aho no nanana fofombady avy any an-danitra, ary tsy hita maso. Azy manontolo ny foko, tsy mivadika aminy aho manadram-pahafatiko. Mba hitiavako azy dia madio aho. Hanatona azy tsy misy pentina aho ary mba hananako azy dia virjiny aho. Io vadiko io dia i Kristy izay tompoin'ny anjely. I Kristy, ilay mampamirapiratra ny kintana aman-bolana ny hatsarany. Izy, ary Izy irery ihany no hiarovako ny finoako."
Rehefa nandà ny fangatahana i Agnès dia naboridan'ny Préfet tanteraka ka nentina nitanjaka nitety tanàna ho any amin'ny toeran'ireo mpivaro-tena. Dia hoy i Agnès: "Tsy matahotra aho, ny vadiko, Jesoa Kristy, dia mahay miaro ny vatako sy ny fanahiko". Tampoka, naniry volo avokoa ny vatany iray manontolo, ary rehefa tonga teo amin'ilay toerana nitondrana azy dia nisy anjely niseho, nandrakotra azy hazavana mamiratra. Lasa toeram-pivavahana io toerana io. Tonga tao ilay tovolahy izay saika haka azy an-keriny, kanjo nisy demony nanakenda azy, ary maty io. Naverin'i Agnès anefa ny ainy, niova ilay tovolahy noho io fahasoavana io ary nilaza fa kristianina. Romotry ny hatezerana ilay Préfet rain'ity tovolahy ka nanome baiko ny handorana an'i Agnès ankalamanjana toy ny mpamosavy nefa tsy nahakasika an'i Agnès ny afo fa nifototra tamin'ireo mpampijaly. Farany, notapahan'izy ireo tamin'ny sabatra ny tendany. Nangovitra ity hamono azy, nefa nankaherezin'i Agnès hoe: "Kapohy, aza matahotra mba ahafahako haingana mankany amin'ilay olon-tiako. Poteho ny vatako izay tsiriritin'ny mason'ny mety maty." Nokapaina ny tendany, ary nodimandry i Agnès teo amin'ny faha-13 taonany.
I Masimbavy Agnès no mpiaro ireo mikajy ny fahadiovan'ny vatana, ireo lasibatry ny fanolanana, ny mpivady. Ny marika famantarana an'i Masimbavy Agnès amin'ny sary izay mety hanehoana azy dia misy ondry fotsy, eo ihany koa ny palme izay famantarana ireo martiry, fehiloha vita amin'ny ravin'oliva, ny sabatra ary ny afo.